10 ဥရောပမှာတော့အများစုကတင့်တယ်လမ်းများကို | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > 10 ဥရောပမှာတော့အများစုကတင့်တယ်လမ်းများကို
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ရထားခရီးသွားဒိန်းမတ်, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, Train Travel စကော့တလန်, ရထားခရီးသွားစပိန်, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား
ဥရောပအလှဆုံးလမ်းများကိုအချို့နှင့်ပြည့်ဝ၏. အများဆုံးကြော့နှင့်ရောင်စုံအနေဖြင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောအဖို့. ဥရောပမှာအများစုကတင့်တယ်လမ်းတွေအချို့သည်ခရီးသွားဧည့်လမ်းကြောင်းအပေါ်ပြီးသားရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်စွာထူထောင်နေကြပေမယ့်အခြားသူတွေကိုမှန်ကန်များမှာ ဝှက်ထားသောကျောက်မျက် သူတို့သာပုသိထွက် Scout နိုင်ပါလိမ့်မည်ကြောင်း. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိပ်တန်းစာရင်းအတူတူထားကြပြီ!
1. ဥရောပမှာတော့အများစုကလှပလမ်း: Cremieux လမ်း, ပဲရစ်, ပြင်သစ်
အဆိုပါရောင်စုံအိမ်များနှင့် quaint အကြောင်းကိုတစ်ခုခုရှိပါသည်, ၏ cobbled လမ်းများ Cremieux လမ်း ကြောင်းချမဖြစ်နိုင်သင့်ကင်မရာချပြီးလုပ်! ဒါဟာအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ Parisian လမ်းပေါ်ပန်းရောင်နှင့်အတူစီတန်းဖြစ်ပါတယ်, အစိမ်းရောင်, အဝါရောင်, နှင့်ဘလူး, ကြောင်း, တာဝန်ဓာတ်ပုံကိုရိုက်ကူးဘို့မဆိုမတ်မတ်ကိုက်ညီမဆို color ကို. အဆိုပါဂရမ်အဘို့ထိုသို့ပြု, ယောက်ျားတွေ!
2. Toledo မှတဆင့်, Naples, အီတလီ
Via Toledo သည်ရှေးဟောင်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး Naples မြို့ရှိမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့စျေး ၀ င်လမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်, အီတလီ. ဤ 1.2 လမ်းပေါ်မှာ၏ကီလိုမီတာဥရောပမှာအများစုကတင့်တယ်လမ်းတွေများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်. ဒါဟာ Piazza Dante မှာစတင်သည်နှင့် Piazza Trieste အီး Trento အတွက်အဆုံးသတ်, Piazza del Plebiscito အနီး.
လမ်းပေါ်မှာ၏ဆောက်လုပ်ရေး Naples တစ် viceroy နေဖြင့်အမိန့်ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်, Pedro Alvarez က de Toledo, တွင် 1536. Toledo မှတဆင့် 18 နှင့် 19 ရာစုနှစ်များနှင့် Neapolitan အဘိဓါန်သီချင်းတွေကိုကျေးဇူးတင်အတွက်ဂရန်းလှည့်လည်ခရီး၏အကျိုးဆက်အဖြစ်ကျော်ကြားဖြစ်လာခဲ့သည်, ဒါကြောင့်မကြာခဏဖော်ပြခဲ့တဲ့ခဲ့သည့်အတွက်.
မီလန် Naples မှရထား
Florence Naples မှရထား
ဗင်းနစ် Naples မှရထား
Naples ရထားမှ Pisa
3. ဥရောပမှာတော့အများစုကလှပလမ်း: Kynance Mews, လန်ဒန်, အင်္ဂလန်နိုင်ငံ
အိုင်ဗီအိမ်များနှင့်လျှို့ဝှက်လှေကားဖုံးလွှမ်း. Kensington အတွက် Kynance Mews ဝေးနေဖြင့်ဥရောပမှာအများစုကတင့်တယ်လမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်. ဆောင်းဦးရာသီမှာတော့, လမ်းပေါ်မှာအစိမ်းရောင်နှင့် burgundy အရွက်နှင့်အတူ glows, နှင့်နွေဦးရောက်ရှိလာသောအခါ, အိမ်များကိုတစ်ခရမ်းရောင်သစ်တောသို့လှည့်. လန်ဒန်၏ဤဧရိယာကောင်းကင်ဘုံ၏မည်သည့်ဘလော့ဂါရဲ့ idea က!
4. Calleja က de လာ့စ်ဗီး Flores, Cordoba, စပိန်
အဆိုပါ Calleja de las Flores Andalusia အတွက် Cordoba မြို့၏လူကြိုက်အများဆုံးခရီးသွားဧည့်လမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, စပိန်. ဒါကြောင့်ဥရောပမှာတော့အများစုကတင့်တယ်လမ်းတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရငျးတှငျအဘယ်ကြောင့်ဒါဟာအစဖြစ်တယ်. လမ်းပေါ်မှာ Velazquez Bosco တစ်ခုလမ်းဆုံအဖြစ် positioned, တစ်ဦး Plaza အတွက်အဆုံးသတ်တဲ့ကျဉ်းမြောင်းတဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်.
အဖြူရောင်နံရံများကိုမရေမတွက်နိုင်တဲ့နှင့်အတူစီတန်းနေကြသည်, geranium နှင့်ဇော်မွှားပန်းနှင့်ပြည့်စုံတောပန်းပွင့်အိုးများ, မြို့၏ဤအမှန်တကယ်အထူးစိတျအပိုငျးမှအရောင်တစ်ဘုန်းကြီးသောပေါ့ပ်ပေးခြင်း. ယင်း၏ကျဉ်းမြောင်းနှင့်အတူ, cobbled ကြမ်းပြင်, ကျောက်တိုင်များ, လှပသောနံရံပုံစံမျိုးဖြစ်သည်, အဆိုပါ Mezquita ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတစ်ခုပြီးသားစုံလင်သောဓာတ်ပုံရန်ပြီးပြည့်စုံသောအပွငျအဘို့အအောင်နံရံအကြားကနေမြင်ကွင်းကို၌တည်ရှိ၏.
5. ဥရောပမှာတော့အများစုကလှပလမ်း: Chalcot ရင်ပြင်မှာ, လန်ဒန်, အင်္ဂလန်နိုင်ငံ
တစ်နေရာတွင်ပိတ်မိနေသည် လေးထောင့်ကွက် Primrose Hill အနီး, သငျသညျဥရောပ၌အလှဆုံးလမ်းများထဲကတစ်ခုနှင့်အဖြစ်တွေ့လိမ့်မည် အများဆုံး Instagrammable! မြင့်မားတဲ့ရပ်ကြောင်းတော်တော်လေး pastel မြို့တွင်းစုပေါင်းတစ်တန်းမြင်ယောင်, ငယ်လေးတစ်ဝှမ်းလှု, Chalcot ရင်ပြင်ကြောင်းအစိမ်းရောင်ပန်းခြံ. ဒါဟာဝေး Regents ပန်းခြံနှင့်ကျော်ကြားသောကန်ဒန်း Market ကနေကျောက်ကိုပစ်ဖြစ်ပါသည်.
6. Rozenhoedkaai, အသုံး, ဘယ်လ်ဂျီယံ
သငျသညျရုပ်ရှင်ကိုစောင့်ကြည့်ကြလျှင်, Colin Farrell နှင့်အတူ Bruges အတွက်. ထိုအခါသင်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပတ်သက်. စကားပြောနေကြသည်အတိအကျဘာကိုသိရကြလိမ့်မည်. ဒါကဖြစ်ကောင်းကြောင်းပို့စကတ်အခိုက်အဘို့အအရှိဆုံး idyllic အစက်အပြောက်တစ်ခုဖြစ်တယ်! Rozenhoedkaai ဤစာရင်းတွင်အပေါ်အခြားသောအရပ်တို့ကိုမထက်နဲ့တူလျော့နည်းလမ်းပေါ်ဖြစ်နိုင်သည်, သို့သော်, ကျွန်တော်နေဆဲအထူးဖော်ပြထားခြင်းခံထိုက်ထင်. မည်သို့ပင်နှစ်အချိန်, Rozenhoedkaai င်း၏ဧည့်သည်များအတွက် glows. ယင်းနှင့် ပတ်သက်. enchanting ဒီတော့တစ်ခုခုရှိပါသည် ရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင်ဗိသုကာ နီးပါးတူးမြောင်းရေထဲသို့ dips ကြောင်းနှင့် billowing သစ်ပင်.
Bruges ရထားမှ Antwerp
Halle နှစ်ခု Bruges ရထား
7. ဥရောပမှာတော့အများစုကလှပလမ်း: ဗစ်တိုးရီးယားလမ်း, Edinburgh, စကော့တလန်
Edinburgh ကိုဆင်းနေတဲ့အပန်းဖြေလမ်းလျှောက်ပျော်မွေ့ဗစ်တိုးရီးယားလမ်းပျော်စရာနှငျ့ပွညျ့စုံ cobbled, ထူးခြားတဲ့ဆိုင်များ, နှင့်စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ. ဗစ်တိုးရီးယားလမ်းကျောက်နံရံများနှင့်အသက်အရွယ်အရွယ်ကျက်သရေအားလုံးကျော်ကနေဧည့်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်နှင့်အတူမြို့ရဲ့သမိုင်းတစ်ဦးအစိုင်အခဲအပိုင်းအစဖြစ်ပါသည်. သငျသညျ 14 ရာစုအတွက်အစပြုသည့် Grassmarket ဆင်းလမ်းလျှောက်တက်ကောက်ဖို့ဒေသခံအသီးအနှံနှင့်-bits အမျိုးမျိုးရောင်းချသေချာအောင်လုပ်ပါ.
8. Nyhavn, ကိုပင်ဟေဂင်, ဒိန်းမတ်
Nyhavn သည်အရောင်နှင့်အတူပြည့်နေသောရုပ်ပုံပြည့်စုံကောင်းမွန်သော Port side လမ်းဖြစ်ခြင်းအတွက်သေတ္တာကိုအမှန်ခြစ်ပေးသည်, idyllic လှေရွက်တိုင်နှင့်အတူ, ချိုသောကဖေးများ, နှင့်နှစ်ဖက်စလုံးတန်းစီ classy စားသောက်ဆိုင်. ဒါဟာမြို့ကကိုပင်ဟေဂင်ရဲ့ဇာတ်ဆောင်လေထုနှင့် hipster Vibe အဖြစ်မွို့တှငျအမြားဆုံးပါလမ်းပေါ်ဂုဏ်ယူ. ကိုပင်ဟေဂင်သို့သွားရန်ခရီးနှင့်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံမျှမပြည့်စုံပါ.
9. ဥရောပမှာတော့အများစုကလှပလမ်း: Burano, ဗင်းနစ်, အီတလီ
လမ်းလျှောက် (သို့မဟုတ်လှေစီးနင်း) ဗင်းနစ်၌ဤလှပသောလမ်းပေါ်ကိုဆင်းသက်တံ့၏ခရီးစဉ်ကိုယူပြီးကဲ့သို့ဖြစ်၏. Burano Venetian- အဂွကြားတွင်ကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်ပါသည်, သငျသညျလညျပတျဖို့အစဉ်အဆက်ကံကောင်းအလုံအလောက်ရှိပါတယ်လျှင်မူကားသင်သည်သင်၏ကင်မရာကိုဖမ်းဆုပ်ပါလိမ့်မည် (ဆဲလ်ဖုန်း) ချက်ချင်း. လှပတဲ့တူးမြောင်းဖြောင့်ကတဆင့်အပြေးနှင့်အတူအိမ်များဒါ enchanting အောင်. ၎င်းသည်မည်သူမဆို၏စိတ်ကိုချက်ချင်းရုတ်သိမ်းပေးနိုင်သည့်နေရာဖြစ်သည်.
10. အရှေ့ဘေးထွက်ပြခန်း, ဘာလင်, ဂျာမနီ
အဆိုပါကမ္ဘာကျော်အရှေ့ဘေးထွက်ပြခန်းတစ်ခုအပန်းဖြေလမ်းလျှောက်ဆင်းကိုယူ. အားလုံးဘာလင်တံတိုင်း၏အကြွင်းအကျန်များနှင့်အတူအသစ်မွမ်းမံထားတဲ့အမှန်တကယ် Open-ဝေဟင်ပြခန်းနှင့်အတူတစ်ဦးကလမ်းပေါ်မှာ. အဆိုပါအနုပညာလက်ရာများမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်သကဲ့သို့ဒီလမ်းပေါ်ကိုဆင်း galore Insta အခွင့်အလမ်းများရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်လည်းဘာလင်သမိုင်းနှင့်စစ်အေးတိုက်ပွဲတစ်ခု chilling သတိပေးချက်ဖြစ်ပါတယ်.
သငျသညျဥရောပမှာအများစုကတင့်တယ်လမ်းတွေကိုသွားနှင့်သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား? သင်တို့နှင့်အတူရှိစာအုပ်ဆိုင်သေချာပါစေ တစ်ဦးကရထား Save အဘယ်သူမျှမပိုဝန်ဆောင်ခ, အဘယ်သူမျှမပျော့သွားတာကို, ပဲပျော်စရာ!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “10 အများစုကတင့်တယ်လမ်းတွေမှာတော့ဥရောပ Explore ရန်” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-beautiful-streets-europe%2F%3Flang%3Dmy – (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, သငျတို့သက de မှ / fr သို့မဟုတ် / es နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကား / ပြောင်းလဲနိုင်သည်.
ယူနိုက်တက် europetravel longtrainjourneys ချစ်သူ trainjourney ရထား ရထားအကြံပေးချက်များ